UTim Cook ukhalaza "ngohlaselo olubi oluthe cwaka eMelika" | Ndisuka mac
Iindaba ezibuhlungu kwisixeko saseLas Vegas, eNevada, eUnited States. Kuyabonakala ukuba, indoda eneminyaka engama-62 ubudala yadubula kwifestile yehotele yayo kwihotele yodumo eyaziwayo ebizwa ngokuba yiMandalay Bay, ijolise kwinginginya yabantu ababeze kubona ikonsathi yomculo welizwe. Ukufa kwabantu abaninzi, ngaphezulu kwe-500 yenzakele kwaye ilizwe lothukile emva kolunye lolona hlaselo lukhulu kwimbali yalo.
UTim Cook, u-CEO we-Apple, kunye namanye amanani abalulekileyo (iimbaleki, abezopolitiko, abadlali beemvumi, iimvumi, ...) kunye nabaphetheyo belizwe, bebephakathi kwabokuqala ukugweba esi senzo sibi esishiya umhlaba wonke kunye nabo imilomo ivulekile.
Nge-Twitter, Umongameli ophezulu wenkampani yaseMntla Melika ufune ukugweba nasiphi na isenzo sobugrogrisi ngale ndlela, kwaye wanikezela ngenkxaso kumaxhoba kunye neentsapho zawo, kwintlekele eza kungena kwiincwadi zembali zaseMelika njengenye yezona hlaselo zikhulu kwezakha zehlela.
Amazwi kaCook abonisa intlungu enzulu yoluntu lwaseMelika kunye nawo wonke umntu kwihlabathi jikelele:
"Iintliziyo zethu ziya kumaxhoba aseLas Vegas, iintsapho zabo kunye nabathandekayo babo bebuhlungu ngenxa yeendaba ezimbi."
Nangona izizathu ezikhokele le Melika ngokuzalwa ukuba yenze impambano enjalo azikacaci, ngokucacileyo I-Islamic State ibanga uxanduva lokubanga ukuguqulwa kobunqolobi kwiinyanga nje ezimbalwa ezidlulileyo.
Ukusuka kwiSoyDeMac sifuna ukuthumela amandla amaninzi kuwo onke amaxhoba kunye nazo zonke izalamane zolu hlaselo lubi. D.E.P.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook ukhalaza "ngohlaselo olubi oluthe cwaka eMelika"
Imfazwe yeeNqwelomoya: Amaphiko eMfazwe, umdlalo wenqwelomoya omtsha weMac